Calaamada lagu garto ninka guska weyn - Galmada.net
Calaamada lagu garto ninka guska weyn
April 19, 2017 June 11, 2017 admin
ninka haduu fara dheeryahay guskisia waa weyn yahay ama uu caga dheer yahay
naagtana ayadana waa sidoo kale
Hadaba bahda iftineducation.com ayaa idiin soo bandhigeyso Qodobo lagu garto qofka aanu xariirka Haasaawaha dhab ka ahyn .
Balan la’aan : daacadnimada qofka wax yaabaha ugu waa wayn ee lagu garto ayaa ah in uu dhooro balanta, hadii aad mar aragto qofka oo aan tix galin xiliga balanta waa laba arimood midkood in qofkaas uu ku jecleen iyo in uu xiligaas aad balanteen uu la balansanyaay qofka kale ee laguugu dulwado.
Mashquul Aan Jirin: wuxuu ku andacoodaa in uu mashquul yahay wuxuuna soo tiriyaa qofka wax yaabo badan uu kuu muujin karo in uu mashquul yahay, xiligii dan ay kaa gasho wuxuu la soo kala baxaa cududaaro tiro badan aadan maleesan karin.
Codsiyo Tiro Badan: in wax lakala codsado labada lamaane waa muhiim hasa ahaatee codsiga aan ka hadleeno ayaa ah mid ku tusinaya in qofka aad la socoto ku waydiisto wax yaabo qaar aadan awoodin ama kulan kasta shuruud kaaga dhiga in aad keento wax yaabo, waxaadna ka garan kartaa qofka markii uu wax kaa codsado wuu ka xishoonayaa in uu marlabaad hadane codsi ku waydiisto laakiin qofka aan ku rabin uma jixin jixo wax yaabahaas markasta codsigiisa wuu soo taaganyahay.
Galmada Siilka Weyn iyo kan yar